Imran Khan: “Haddii lay dilo, waxaa la baahinayaa muuqaal aan kaga hadlayo cidda i khaarajisay’’. | Dhexnimo Media
Home Wararka Imran Khan: “Haddii lay dilo, waxaa la baahinayaa muuqaal aan kaga hadlayo...
Imran Khan: “Haddii lay dilo, waxaa la baahinayaa muuqaal aan kaga hadlayo cidda i khaarajisay’’.
Ammaanka ra’iisal wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan ayaa aad loo adkeeyey, ka dib markii uu sheegay in la qorsheeyey, isku day dil, oo la doonayey in isaga lagu khaarajiyo. Xafiiska ra’iisal wasaaraha Pakistan ayaa sheegay in uu faray laamaha kala duwan ee dawladda, inay sugaan ammaanka ra’iisal wasaaraha hore, xilliyada uu ku sugan yahay isu-soo baxyada kala duwan iyo shirarka waaweyn.
Xisbiga ra’iisal wasaarihii hore ee Pakistan ayaa abaabulay isu soo baxyo ballaadhan oo looga soo horjeedo dawladda dalkaas ka arrimisa, tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu baarlamaanka dalkaasi xilka ka qaaday Imran Khan iyo xukuumaddiisa, waxaana lagu bedelay ra’iisal wasaare Shehbaz Sharif.
“Waxaan hayaa fariin muuqaal ah oo aan duubay, waxaanna ku hayaa meel ammaan ah. Haddii ay wax igu dhacaan, Ilaahay innaguma keenee, waxaa la sii baahin doonaa muuqaalkan duuban, halkaas oo aan ku faahfaahinayo dhammaan dhinacyada ku lugta lahaa isku dayga la doonayey in la igu khaarajiyo” ayuu sii raaciyey Imran Khan, isaga oo aan faahfaahin dheeri ah bixinin.
Ra’iisal wasaaraha hore ee Pakistan ayaa ku adkaysanaya in lagu ciqaabay, inuu qaatay siyaasad dhex dhexaad ah oo ka madax banaan wadamada reer galbeedka gaar ahaan Maraykanka, taas oo ay ka cadhoodeen safarkii uu ku tegey dalka Ruushka, hase ahaatee Maraykanka ayaa iska fogeeyey eedahaas.
Washington ayaa si joogto ah u diiday eedeymaha ka imanaya ra’iisal wasaarihii hore ee Pakistan, waxayna ku sheegeen inaanay ahayn eedahaasi kuwo sal iyo raad toonna leh.
Previous articleKulan Lagu Gaadhay Heshiis Muhiima Oo Caawa Madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland ku Dhexmaray Asxaabta Qaranka iyo Xukuumadda
Next articleBasaasiin Loo Heysto Inay Xog Ka Ururiyeen Koox Mucaarad Oo Dacwad Laga Gudbiyey